DIGAAGGA KUBALAYA: SHARAXA CALEEMAHA, SIFOOYINKA UGU MUHIIMSAN, FAA'IIDOOYINKA IYO FAA'IIDO DARRADA, SIFOOYINKA BEERAHA IYO DAYACTIRKA - BEERAHA DIGAAGA
Hilibka shimbirta ah ee istaagi kara naftooda - digaagga ayaa dhasha Kubalaya
Digaaggu waxay ahaayeen shimbirihii ugu horreeyay ee ay nin yareeyeen. Laga soo bilaabo waqtigaa, dadku waxay isticmaalaan hilibka iyo ukunta digaagga cuntada, kaliya 4 kun oo sano ka hor Hindiya waxay bilaabeen inay koraan qoryaha dagaalka.
Tan iyo markaas ka dib, warshadaha digaaga ayaa ku guuleystay guusha weyn, tiro badan oo ah noocyadiin ayaa loo jajabiyay ujeedooyinka loo baahan yahay, oo ay ka mid yihiin coutfighting. Mid ka mid ah noocyada dagaal ee lagu guuleysto waa Kubalai Hens.
Aabayaashii reer Duqa Kubalay ayaa ah digaagga dagaal ee Aasiya oo ka soo jeeda Filibiin oo ka soo jeeda Manilos de Regla, oo ay soo bandhigeen reer Isbaanish ilaa Cuba qarnigii sagaalaad.
Halkaas, waxay ka gudbeen Cuban iyo Yurub, iyo sidoo kale digaagga Malayan oo leh digirta digirta.
Astaamaha loo baahan yahay waa:
dharbaaxo dhaadheer leh oo leh dhumuc qaro leh;
xoog leh oo qalloocsan;
Digaagga Kubalaya waxaa loo aqoonsaday in uu yahay Cuban qaran ee 1935. Tani waxay heshay qaybinta dunida oo dhan ka dib markii la soo dhoofiyo Maraykanka 1939, ka dibna ka soo jeeda Maraykanka ee V.Shmudda ilaa Jarmalka F. Svist 1983.
Tilmaamaha dumarka Kubalaya
Digaagga Kubalai waxay ka tirsan yihiin taranka hilibka, maadaama ay si dhaqso ah u quudiyaan oo ay u helaan. Kobaca iyo cabbirka shimbirku waa dhexdhexaad. Waxaa jira noocyo cufan, laakiin marar dhif ah ayaa loo isticmaalaa.
Calaamado dibadda ah ee cirifka qotoma Kubalaya waa:
boomaato midabyo kala duwan, dhalaalaya, dheer, qaro weyn, adag;
dheer oo ballaaran oo dhererkiisu dhan yahay ee jirka oo leh horumarinta midabka ee maskaxda, garabka bidix iyo laabta;
jirka oo si yar ujirta;
khadka udhexeeya naaska iyo caarada daboolka ayaa qaabeeya toosan toosan;
qoortuna waa dheer yahay, waana xoog badan yahay;
on qoorta, daloolka gaaro garbaha;
laabta iyo garbaha si muuqata u baxa;
gadaashu waa mid dheer oo ballaaran, oo ah cabbir isku mid ah oo dhererkiisu dhan yahay;
Xuubka jilicsan ee lafaha lumbar;
"Daboolka lafdhabarta" (qoorta yar oo la gashado oo laga yareeyo 20 digrii oo qiyaasta khadka tooska ah);
dhoobo dheer, oo leh xajmo qaro weyn leh, oo si cad u garaacday;
dhererka dhererka laga bilaabo saldhigga ilaa weelka wuxuu ka weyn yahay dhererka jirka (laga soo bilaabo saldhigga gogosha ilaa saldhiga daboolka);
Gacmeedyada dhinaca ah waa gaaban oo xad-dhaaf ah oo dheer, jiidaya dhulka;
Pushkin ayaa xayeysiisay taranka taranka ee digaagga isla markiiba waxay ka muuqdaan shimbiraha kale sababtoo ah muuqaalkeeda.
Haddii aad rabto in aad ogaato sida korontada looga dhalaalayo guri gaar ah, waxay ku filnaan doontaa inaad akhriso.
caloosha oo kor u kacday, cidhiidhi gaaban;
madaxu hooseeyo, laakiin ballaadhan, oo leh cantoobo caan ah;
wejiga leh midab yar oo guduudan, siman;
buunshuhu waa godad, sedex saf oo, maaha indhahiisa;
dhererka godka ayaa kor u kaca xagga hore iyo gadaal;
hilqadaha iyo isdul-gariirka ee cabbirka aad u yar, guduudan, casaan ah;
gaajo xoog leh, laakiin gaaban, hoos u dhacsan, hooska fudud;
indhahaagu waa yar yihiin oo qoto dheer.
midabka indhaha way kala duwanyihiin casaan ilaa casaan-madow;
canqow dheer, xoog badan;
lugaha waa dhexdhexaad ah dherer, casaan midab leh, oo aan lahayn boomaato;
Dhibaatooyin aad u gaaban ayaa laga yaabaa inay gabi ahaanba ka maqan yihiin;
Faraha ayaa dheer, splayed, casaan.
Calaamadaha aan sharciga aheyn
Khatarta caanaha Kubalaya waxaa ka mid ah:
taallo dhajis ah, oo aan lahayn;
dhererka dhererka ama ballaar la'aanta;
dameer sara kiciyey xagasha;
Roogga gunta ayaa dhif ah.
Doorashada midabeynta shimbiraha
Waxaa ka mid ah shimbiraha taranta ee qurxinta Kubalaya, midab kala duwan ayaa la heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, ikhtiyaarka ugu fiican waa midabka, sida ugu dhow ee suurto galka duurka.
Waayo, midabka duufaanka duufaanku waa mid qarsoodi ah:
madaxa waa casaan;
qoorta-casaan leh jilicsan suurtagal ah, isu beddelaya dahab;
dusha sare ee qoorta waa madow;
gadaasha iyo lumbar ayaa ah casaan-bunni;
laabta iyo caloosha waa madow;
daboolka madow iyo cagaarka;
anqawyada waa madow;
hoos ka soo madow ilaa guduud-casaan;
baalasha qaybaha kala duwan ee casaanka ilaa madow ee xuduudaha madow;
oo leh baalal daboolan, seddex geesood oo casaan-madow waa muuqaal.
Midab digaag digaag ah waxaa ka mid ah:
madaxa madaxa cas-cas;
qoorta gaduud-casaan, laakiin hooska madow oo ka badan madaxa, xaanshiyaha waa suurtagal;
dusha sare ee qoorta waa midabka khafiifka qoraxda;
gadaal iyo dharka qoriga;
xabadka qoraxda iyo caloosha;
daboolka waa madow oo leh xudduud midab leh ama midab khafiif ah;
anqawyada waa sida caloosha;
baalasha ka soo casaan-madow ilaa madow qaybo kala duwan;
hoos u dhacu waa sida caadiga ah ee cawl
Doorashada midab khaldan
Xalalka khaldan waxaa ka mid ah:
qoorta waa midabka cawska ama qashinka ah ee cirridka iyo dahabiga ah ee hen;
maqnaanshaha sadex-xabbo oo dabeecad leh oo leh baalal daboolan;
Xajka cad ayaa laga helaa baalalka iyo daboolka.
Ka mid ah faa'iidooyinka ka mid ah taranka ee digaagga Kubalaya ee muhiimadda koowaad waa:
Awood wanaagsan oo la qabsan karo xaaladaha isbedelka cimilada, taas oo u oggolaanaysa inay u gudbaan dhammaan dalalka adduunka;
Rootiyayaashu waxay leeyihiin dabacsanaan iyo dhaqdhaqaaq weyn, oo ay ugu mahadcelinayaan kuwaas oo loo isticmaalo dagaallada;
dabeecadda shimbiruhu waa mid adag oo adeeca, taas oo fududeyneysa in la xoqdo;
Shimbiraha waxay leeyihiin ukun wanaagsan iyo bacriminta;
Digaagga Kubalai waxay leeyihiin dareen ku dhisid horumarineed.
Digaagga jilaalka Kubalai guud ahaan waxay la mid yihiin cirro, marka laga reebo kala duwanaanta jinsiga caadiga ah. Waa caadi ahaan:
shanlo yar yar;
Dhammaadka godka dhererka ayaa ah mid aad u dheer;
laynka la soo gashado dhabarka dambe ee daboolka ah ma aha mid u siman sida kuwa cirridka;
"Dabaylaha lafdhabarta", si xoogan loo garaaco, hoos u dhigo, shirarka.
Mawduuca iyo taranka
Horumarinta hodheello badan oo ku saabsan daboolka qiiqa iyo kor u qaadista shimbiraha caafimaadka, talooyinka soo socda waa in la raaco: markaad dooranaysid cuntooyinka quudinta, waxaad doorbidaa cuntooyinka hodanka ku ah. Sidoo kale shakhsiyaadka dhallinyaradu waxay inta badan u sheegaan cawska.
Astaamaha Muhiimka ah qoob-ka-shaqeeyayaashu waxay dhaleen Kubalaya kadib:
miisaanka noolaanaya 2 ilaa 2.5 kg;
barafku wuxuu dhacaa da'da laba ama saddex sano;
Qaangadu wuxuu yimaadaa da'da lix ilaa toddoba bilood;
cabbirka garaaca - 4.
Digaagga loogu talagalay dabeecada Kubalaya:
miisaanka noolaanaya 1.5 illaa 2 kg;
ukunta cad ama midab karsan;
miisaanka hal ukun ah celcelis ahaan 50-55 g;
Wax soo saarka ukunku waa boqol illaa boqol iyo labaatan oo ukumood ah;
size size - 5.
Halkee laga gadan karaa Ruushka?
Dalka Ruushka, noocaan ah digaagaha isboortiga ayaa loo arkaa mid naadir ah. Digaagga Kubala ayaa kora oo kaliya Bird ah - xanaanada caruurta ee gobolka Yaroslavl. Telefoonnada xiriirka: +7 (916) 795-66-55, +7 (905) 529-11-55.
Bedelkii digaagga Kubalai, waxaad ka iibsan kartaa shimbiraha leh astaamo isku mid ah, inkastoo aan la mid ahayn iyaga oo aan dibedda ahayn. Waxaa ka mid ah noocyada:
Hindiya - waxay leeyihiin dareen xoog leh oo leh cabir dhexdhexaad ah ama xitaa qulqulka.
Madagascar - Inuu leeyahay isbeddel ku habboon xaaladaha cimilada, iyo sidoo kale, inkastoo muuqaalka muuqda, dabeecad adeec.
Brahma mugdi - mid ka mid ah digaagga ugu badan. Ruushka, waxaa loo jecel yahay dabeecadooda aan fiicnayn iyo midhaha.
Vietnamese - Caanaha loo isticmaalo ciyaaraha iyo hilibka labadaba. Muuqaal muuqda waa lugo aad u ballaaran.
Chamo iyo Koh Shamo - digaagga aadka u adag ee cabbirka dhexdhexaad ah, waxay ku kala duwan yihiin duruufaha tooska ah.
Luttiher - Digaagga oo leh muuqaal fara badan oo muuqaal ah iyo garab ballaadhan, oo murqaha badan leh.
Sida nooc kasta oo kale, digaagga Kubalai waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Si kastaba ha noqotee, dhammaan tayada wanaagsan ee nuucaani waxay muujinaysaa oo kaliya buuxinta maaddada iyo tababarka saxda ah. Kaliya shimbir dabiici ah, caafimaad leh iyo jir ahaanba xoog leh, waxay awoodi doonaan inay muujiyaan natiijooyinka lagama maarmaanka ah.
Uruurinta jelly boqornimada, sida loo helo alaabta ee apiary
Spiraea Berezolistnaya: qaababka beerashada
Imisa litir oo caano ah ma bixiyaan lo'da?
Ukunta ukunta: faa'iido ama waxyeello
Farshaxanimada Vyatka: sifooyinka guud, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Waxaa ka mid ah dhirta indoor caan ah, succulents, isku daraya qurxinta iyo bogsiinta guryaha, degaan meel gaar ah Kalanchoe. Inkasta oo dhaqankan uu aad ugu caansan yahay beeralayda ubaxa, waxaa badanaa la koraa ama la faafiyaa si khalad ah. Haddii aadan ku habboonayn ubax daryeel leh, ma awoodi doono inuu si buuxda u muujiyo saameynta qurxinta. Read More
Sida loo koro amorphofallus guriga
Daroogada "Tiovit Jet": tilmaamaha isticmaalka